Ny tena kristiana dia manapaharetana - Vaovao mahafaly ho anao - Miomana hihaona amin Andriamanitrao- vaovao malagasy
Ambarantsika ombieny ombieny fa ny mahakristiana marina ny olona iray dia ny vokatra entiny, izany hoe ny toetrany amin’ny andavanandro, aoka isika tsy ho sodokan’ny hoe mahay mitoriteny, mahay mandahateny, manao ny asan’Andriamanitra fa aoka ny vokatra entiny no amanatarantsika ny tsirairay, ary amantaratsika ny tenantsika voalohany indrindra. Hoy Jesosy kristy hoe:
“ Ka dia ny voany no hahafantaranareo azy.” Matio 7.20
Ny tena kristiana marina dia miova amin’ny toetrany teo aloha, raha kizitina izy fahiny mbola tsy nanana an’i Jesosy dia tsy kizitina intsony izy rehefa manana ny Tompo, raha tezi-dava izy taloha dia tsy izay intsony izy rehefa nandray an’i Jesosy, raha tsy nananapaharetana izy taloha dia tsy izay intsony izy rehefa ao anatiny Kristy. Maro ireo vokatra takian’ny tenin’Andriamanitra fa anio dia ny faharetana no ianarantsika satria anisan’ny takian’ny tenin’Andriamanitra izany.
“Fa ny vokatry ny Fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana”. Galatiana 5.22
Firifiry moa tsika kristiana no tsy manampaharetana, raha manana fahatarana kely ny olona iray mifanao fotoana amintsika, na misy zavatra andrasantsika, manao ahoana ny fihetsikitsika sy ny tenintsika avy eo? Raha misy zavatra iray andrandraina ka misy fahatarana na tsy tonga amin’ny fotoana iandrasantsika sy ilantsika azy, tahaka ny ahoana ny hatezerantsika?
Dia betsaka no mbola voagejan’izany toetra izany, mandeha ampiangonana foana ihany, manao asan’Andriamanitra foana, ary mavitrika ery fa ao anaty ao mbola tsy manampaharetana, fa mora sosotra mora sendotra ary maika lava, satry hanaraka ny fandaharampotoanan’ ny tena foana ny an’ ny hafa ka raha vao tsy izay dia tafitohina mafy! Mampianatra antsika ny tenin’Andriamanitra mba hanampaharetana!
“ Ny fitiavana mahari-po sady mora fanahy” 1koritiana 13.4
Manamafy ihany ny voasoratra eo ambany hoe:
“Ny fitiavana maharitra ny zavatra rehetra”. 1korintiana 13.7
Samy manana ny fihetsika ivelany avokoa ny kristiana fa ny fananany faharetana dia ahitana fa mandeha araka ny fanahy tokoa izy ary miaina tanteraka amin’ ny fandresena ny tsy faharetana, ary ny kristiana rehetra dia tian’ny Tompo hanana faharetana amin’ny olon-drehetra, amin’ny zavatra rehetra. Tsy moramora ny ananana faharetana ary tsy afaka foronina sy ezahina fa mila fifandraisana marina amin’I Jesosy kristy satria izy ilay feno faharetana amintsika, izy ilay manampaharetana amin’ny ataontsika ary afaka miasa ao anatintsika mba ananantsika toetra tahaka izany ihany koa.
Fahamarinana iray manampy antsika hanampaharetana ny fahalalana sy fiainana ilay tenin’Andriamanitra diso haintsika loatra hoe :
“Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an’Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo”. Romana 8.28
Izany hoe ny toe-javatra rehetra miseho, na fahatarana izany na fitavozavozan’ny hafa na fihemoram-potoana na toetran’olona mila iaretana, dia entin’Andriamanitra hanefena sy hanasoavana antsika ary indrindra anamboarany antsika mba hitovy amin’i Jesosy Kristy avokoa, ka ny fahafantarantsika izay fahamarinana izay dia hanampy antsika hanampaharetana amin’ny toe-javatra rehetra ary tsy ho sosotra amin’olona fa hanaiky fa fandaminan’Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny olana dia fitaovana eo ampelatanany anefena antsika isanandro anahafantsika azy.
Ny kristiana mahatakatra izany fahamarinana izany dia manampaharetana, ary tsy sendotra amin’izay mety tsy mifanaraka amin ny noeritreretiny.
Aza gaga isika raha mahalala mpanompon’Andriamanitra mahay mitory teny fatratra, mandresy lahatra tanteraka amin’ny toriteniny kanefa tsy manampaharetana amina zavatra kely foana, ny antony dia satria ilay fiainan’i Jesosy mihitsy no mbola tsy ao anatiny, averina ihany fa io fiainana io dia tsy azo raha tsy manan fifandraisana marina aminy isanandro isanandro, mamela ny Fanahy Masina hiasa sy hanao ny asa ao anaty.
Raha tsy manampaharetana ianao ary te hiala amin’izany toetra tsy tian’ ny Tompo izany dia aoka iankina tanteraka amin’ ny Fanahy Masina ary hamela azy hiasa ao anatinao, ny finoanao fa ny natiora vaovao nomeny anao tamin’ ny nandraisanao azy marina tao am-ponao dia ampy anahafanao Azy ka tsy ho lalana aminao intsony ny tsy fananana faharetana fa hanana faharimpo, faharetana ianao, ary fahononantena mba tsy ho sendotra na hanota vokatry ny tsy fanananao faharetana.“
Fa tsy nomen’Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena.” 2 Timoty 1: 7
Ny fahafantaranao ny sitrapon’Andriamanitra ka fampiharanao izany dia mampitombo ny vokatra entinao ho an’ny Tompo, ary ny fananao vokatra araka ny sitrapon’Andriamanitra dia midika fa mpianatry ny Tompo ianao ary manahaka azy isanandro isanandro.